ဖူဂျီဟာလမ်းဘေးဆိုင်ကယ်ကောင်းလား။ - အကောင်းဆုံးအဖြေများ
အဓိက > အကောင်းဆုံးအဖြေများ > Fuji အသင်းစက်ဘီးစီး - လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်
Fuji အသင်းစက်ဘီးစီး - လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်
Fuji စက်ဘီး၁၈၉၉ တွင် Japan တွင်ပထမဆုံးတည်ထောင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ရှေးအကျဆုံးဖြစ်သည်ဆိုင်ကယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာကုမ္ပဏီတွေ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတယ်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီကုန်ထုတ်လုပ်မှုမှာလမ်းဘေးဆိုင်ကယ်များသူတို့ရဲ့ Transonic နှင့် Sportif ဟာအရောင်းရဆုံးဖြစ်သည်လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်များသူတို့ရဲ့အကွာအဝေးအကြား။
သင်သည်သင်၏ပထမဆုံးလမ်းဆိုင်ကယ်ကို ၀ ယ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်၊ အံ့သြလောက်စွာသင်သည်သင်၏ပထမဆုံးခြေလှမ်းကိုပိုမိုကြီးမားသောကမ္ဘာသို့လှမ်းလိုက်သည်၊ သို့သော်သင်၏ပထမဆုံးစက်ဘီးကိုဝယ်ခြင်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများနှင့်မတူညီသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမတူကွဲပြားသောအမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများဖြစ်ဟန်တူသောကြောင့်ရှုပ်ထွေးမှုရှိသည်နှင့်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ ငါဒီဆောင်းပါးမှာပါ။ လက်တွေ့ကျတဲ့လမ်းညွှန်တစ်ခုပေးပါလိမ့်မယ်။ ဘာကိုရှာဖွေရမလဲ၊ ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားမှုတွေဆိုတာကျွန်တော်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးတကယ်စိတ်အားထက်သန်တယ်၊ ပိုကောင်းတဲ့ခွဲထွက်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ Decathlon နဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့မှာတကယ့်ပြည့်စုံတဲ့စက်ဘီးပါပြီးထူးခြားတဲ့အင်္ဂါရပ်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ သူတို့လည်းပိုက်ဆံအတွက်အရမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်။ ဆိုလိုတာကဒီဟာငါ့ကိုသင်လုပ်နိုင်တာအားလုံးကိုပြဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်တယ်၊ ငါလည်းလိုအပ်တယ် အသစ်တစ်ခုကိုစရင်းစွန်ပေါင်းတစ်ကောင်နှင့်အတူငှက်နှစ်ကောင်ကိုသေစေတဲ့အတွေး။ သင်သိဖို့ပထမ ဦး ဆုံးသင်ငွေဘယ်လောက်သုံးချင်တယ်၊ သင်ငွေဘယ်လောက်သုံးသင့်တယ်၊ လမ်းဆိုင်ကယ်ဝယ်ဖို့လာသောအခါထိုမေးခွန်းအတွက်မှန်ကန်သောအဖြေမရှိပါ။ သို့သော်သင်သိနိုင်သည်မှာမြင့်မားသည် အရည်အသွေးနိမ့်သောလမ်းအဆင့်ရှိစက်ဘီးများသည်များသောအားဖြင့် ၂၆၀ သို့မဟုတ် ၂၅၀ ခန့်လောက်မှစတင်သည်။ ထို့နောက်သင်ပိုငွေများများများရလေဘောင်များသည်ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးခိုင်မာသော၊ ထိုဘောင်များရှိအစိတ်အပိုင်းများသည်သင်ယူရို ၆၀၀ ၀ န်းကျင်အတွက်ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။ စက်ဘီးစီးခြင်းကြောက်စရာငွေများစွာရနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အလူမီနီယံဘောင်ပါ ၀ င်သောအဆင့်နိမ့်အစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သည့်အရာတစ်ခုခုရှိနိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဘရိတ်နှင့်စက်ဘီးများသည်ဤကဲ့သို့သောစက်ကိရိယာများကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ တောင်များ၊ စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့လူမျိုးပြိုင်ပွဲအနည်းငယ်ကိုကျွန်တော်သိတယ်။ ပထမလမ်းဘေးမှာငါလုပ်ခဲ့သမျှတွေအားလုံးကမင်းရဲ့ပိုက်ဆံအားလုံးကိုစက်ဘီးတစ်စီးတည်းမှာပဲမသုံးပါနဲ့၊ ဘတ်ဂျက်အားလုံးအပေါ်ဘတ်ဂျက်လိုချင်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဖိနပ်၊ ခြေနင်း၊ အဝတ်အထည်နှင့်သင်၏စက်ဘီးကိုရွေးချယ်သောအခါသင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကဲ့သို့၎င်းနှင့်တွဲဖက်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းများသည်ဘရိတ်အတွက်စုပေါင်းအသုံးအနှုန်းမှဖြစ်ပြီးဂီယာအပြောင်းအလဲသည်အုပ်စုအုပ်စုဖြစ်သည်။ SRAM microchip နှင့် Shimano သည်နာမည်အကြီးဆုံးအုပ်စုဖြစ်သည့် Hierarchies နှင့်အုပ်စုအဆင့်အဆင့်များကိုမြှင့်တင်လိုက်သောအခါ၎င်းတို့သည်စျေးကြီးလာသည်နှင့်အစိတ်အပိုင်းများသည်ပိုမိုပေါ့ပါးလာသည်နှင့်အမျှအစိတ်အပိုင်းများကပိုမိုပေါ့ပါးလာသည်။ ထူးခြားဆန်းပြားသောပစ္စည်းများနှင့်ရွေ့လျားနေသောဂီယာများသည်ပိုမိုချောမွေ့လာပါလိမ့်မည်။ ယခုလက်ရှိစတင်အဆင့်စက်ဘီးများနှင့်အဝင်အဆင့်လမ်းပေါ်စက်ဘီးများသည်အဆင့်ဆင့်အောက်ပိုင်းရှိအုပ်စုများဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဤသည်မှာ Shimano အုပ်စု၏ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်သော Shimano Sora ဖြစ်သည်။ £ 500,00 န်းကျင်စက်ဘီး; Shimano Sora သည် groupet hierarchy တွင်နိမ့်ကျနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လုံးဝစုံလင်သော ၀ င်ခွင့်အဆင့်သို့မဟုတ်စက်ဘီးစီးခြင်းမှသင့်အားတားဆီးခွင့်မပြုပါ။ ကျွန်တော်ပထမဆုံးစီး။ စက်ဘီးကို Shimano တက်ခိုင်းတယ်။ ငါတောင်ဒါမှမဟုတ်တောင်အနည်းငယ်ရေးခဲ့တယ်။ ငါစီးပြီးစီးခဲ့တဲ့လူမျိုးအနည်းငယ်အကြောင်းကိုတောင်ငါရေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်စိတ်ထဲမှာထားရမယ့်အရာတစ်ခုကတော့အုပ်စုရဲ့ဂီယာအချိုးအစားပါ။ ဒီစက်ဘီးကနောက်ဘက်မှာ 1132 ကက်ဆက်ပါရှိပါတယ်။ သင်၏ပထမဆုံးလမ်းဘေးဆိုင်ကယ်စီးရန်အတွက်ငါဘာအကြံပေးလိမ့်မည်နည်း။ အကြောင်းပြချက်မှာကက်ဆက်၏ကျောဘက်ရှိသွား ၃၂ ခုသည်တောင်ကုန်းများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ခြေထောက်များကိုပိုမိုလှည့်ဖျားခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်အတန်းကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်တောင်များကိုသာ ပို၍ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေနိုင်သည် ၎င်းသည်အနည်းငယ်ပိုမိုခက်ခဲသောကက်ဆက်တစ်လုံးနှင့်အတူလာသည့်စက်ဘီးအချို့နှင့်မတူသည်။ ၂၈ အာရုံစိုက်ပြီးကွင်းဆက်အစုများတွင်မတူညီသောအရွယ်အစားများရှိသည်။ သင်၏ပထမဆုံးလမ်းဘေးဆိုင်ကယ်အတွက်ကျွန်ုပ်အကြံပြုချင်သည်မှာ ၅၀:၃၄ ကဲ့သို့ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကွင်းဆက်ဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာရှိနှင့်ငါ 32s အကြံပြုမယ်လို့တူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်များအတွက်, backit သင်တစ် ဦး အစပြုသူဖြစ်လျှင်တောင်ကုန်းအနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သင်ဟာစက်ဘီးစီးသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသင်လိုချင်တဲ့တောင်ကုန်းများပေါ်တက်နိုင်အောင်ဂီယာများတပ်ချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ဘီးနှင့်နောက်ဘက်သေးငယ်တဲ့ဘောင်းဘီတွေကလည်းအုပ်စုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Rim ဘရိတ်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ဒီစက်ဘီး disc disc brakes ကိုသင်မြင်နိုင်သလိုဒီဘရိတ်တွေဟာအနားကွပ်ဘရိတ်တွေထက်အနည်းငယ်ပိုကုန်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အကယ်လို့သင်ဟာတောင်ထူထပ်တဲ့inရိယာမှာနေရင်စီးနင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အထူးသဖြင့်စိုစွတ်သောအခြေအနေများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောထိန်းချုပ်မှုကိုသာရရှိသောကြောင့်၎င်းတို့သည်ပိုမိုအားကောင်းသည့်ဘရိတ်များကမ်းလှမ်းသောကြောင့်တောင်တန်းဒေသများတွင်၎င်းတို့သည်ပိုမိုအားစိုက်ထုတ်သင့်သည်ဟုပြောလိမ့်မည်။
ငါဘယ်လောက် carbs စားသင့်တယ်
သူတို့ကိုငါအသုံးပြုသောအနားကွပ်ဘရိတ်များသည်အပြည့်အဝလုံလောက်သော Tour de France ကိုအနှစ် ၁၀၀ ရရှိရန်လိုသည်၊ ၎င်းတို့သည်ဘရိတ်များထက်အနည်းငယ်ပိုမိုပေါ့ပါးခြင်း၏အားသာချက်မှာကြီးမားသောသက်ရောက်မှုများရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် လူကြိုက်အများဆုံးသောပစ္စည်းများနှင့်အတူစက်ဘီး၏စီးဆင်းမှုအရည်အသွေးမှာယူရိုနှင့်ဒေါ်လာ ၂၅၀ မှ ၁၀၀၀ အတွင်းရှိသောအလူမီနီယမ်၊ သံမဏိနှင့်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာများဖြင့်သင်တွေ့ရှိနိုင်သောစက်ဘီးအများစုကိုအလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အလူမီနီယမ်သည်အလွန်စွယ်စုံဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည်အင်အားကောင်းသောအလေးချိန်နှင့်အလေးချိန်အချိုး ဖြစ်၍ လေကြောင်းတွင်အသုံးပြုသောအခါ၎င်းသည်မြင့်မားသောချေးခြင်းနှင့်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာများထက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်စက်ဘီးစီးခြင်းသည်ယူရိုတစ်ထောင်ကျော်စျေးနှုန်းသက်သာနိုင်သည်။ ။ ဒီ vanreisel edr 105 (သို့) သီချင်း Sang လို entry-level ကာဗွန်ဖိုင်ဘာစက်ဘီးတွေစတာကိုသင်မြင်ရပြီ၊ သူတို့ကငါတို့ရှေ့ရောက်နေပြီ။ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာသည်အလူမီနီယမ်နှင့်သံမဏိများထက်များသောအားဖြင့်ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးပိုမိုတောင့်တင်းသည်။ အရည်အသွေးမြင့်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာသည်စက်ဘီးစီးရန်အတွက်အလွန်ကောင်းသည်။ သို့သော်သင်၏ဘတ်ဂျက်သည်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာအပြည့်မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မှာလူမီနီယမ်ဖြစ်သည်ကိုမစိုးရိမ်ပါ။ Carbon fiber fork သည်အလေးချိန်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းသည်လမ်းဆုံလမ်းခွကိုပိုမိုတင်းကျပ်စေသည်။ လမ်းဘေးတုန်ခါမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ လက်ကိုင်ဘားများမှတဆင့်အသံလှိုင်းတံဆိပ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ဘောင်ကိုသင့်လျော်စွာဒီဇိုင်းဆွဲပြီးစမ်းသပ်သည်ကိုဤနည်းအားဖြင့်အကြံပြုသည်။ ထို့အပြင်ဘောင်တွင်အစိုင်အခဲခိုင်မာသည့်အာမခံချက်များဖြင့်အဆုံးသတ်ထားသည်မှာတာယာရှင်းလင်းခြင်းကြောင့်ပိုမိုသာလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ပြောမည့် ပို၍ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာတာယာများဖြစ်သည်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကကျယ်ပြန့်သောတာယာများကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ လမ်းမှားများနှင့်စွန့်စားခန်းအနည်းငယ်ပြုလုပ်လိုပါက mudguards, ခရီးဆောင်အိတ်များနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများစွာကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ဘောင်တွင်နောက်ဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာအောက်ခြေကွင်းခတ်ဖြစ်သည်။ စက်ဘီးတိုင်း၏ကွင်းဆက်တပ်ဆင်ထားသည့်အတွင်းပိုင်း ၀ ိုင်အတွင်းထည့်သွင်းထားသော ၀ ိုင်ယာကြိုးတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်တွင်အပိုဆုကြေးများရရှိသောကြောင့်၎င်းတို့သည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းပြီးကြာရှည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယခုတွင်ငါသည်သင်တို့အား Imean ဘီးများအားစက်ဘီးတိုင်းတွင်သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြနေပြီ။ ယခုအဆင့်ရှိစက်ဘီးများသည်ပုံမှန်အားဖြင့် entry-level ဘီးများနှင့်လာသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်စက်ဘီးစီးသူများသည်လိုင်းအောက်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်သည့်လူကြိုက်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာအားကစားကိုပိုတက်ကြွပြီးပိုမိုပေါ့ပါး၊ ပိုမိုခိုင်မာသော၊ လေခွင်းအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုခုကိုလဲလှယ်လေ့ရှိကြသည်။ သို့သော်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်စက်များပေါ်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုများကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုများပြားစေပြီးစျေးနှုန်းလည်းကျဆင်းစေသည်။ ပိုမိုလွယ်ကူသည့်ဘီးဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်စက်ဘီးကိုရှာနေပါကကျွန်ုပ်စက်ဘီးကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုနေသည့်အတိုင်းရှာဖွေနေသည်၊ ၎င်းသည်ဘီးအားပိုမိုခိုင်မာစေရန်နှင့်ပိုမိုအားကောင်းစေရန်ကူညီသည့်အနေဖြင့်အမှန်တကယ်မြင့်မားသောမီးခိုးအရေအတွက်ကိုငါသည်လည်းသင်အနားကွပ်အကျယ်ကိုကြည့်ရန်အကြံပြုလိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံးမှာပိုမိုကျယ်ပြန်သောတာယာများအတွက်ပိုမိုသင့်လျော်သောဘီးများတပ်ချင်သောကြောင့် 25mm တာယာသို့မဟုတ် 28mm တာယာများကဲ့သို့အနည်းငယ်ကျယ်ဝန်းသည့်အနားကွပ်အကျယ်အနည်းငယ်သက်တောင့်သက်သာရှိစေသည်၊ ဆုပ်ကိုင်မှုပိုနည်းပြီး၎င်းတို့သည်တွန်းလှန်နိုင်စွမ်းအနည်းငယ်နည်းသောကြောင့်သင်အတူတူစီးနိုင်သည် အနည်းငယ်လျော့နည်းအားထုတ်မှုနှင့်အတူမြန်နှုန်း။ သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးလမ်းဆိုင်ကယ်ဝယ်သောအခါသင်သိထားသင့်သည့်အခြားမြန်ဆန်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုယခုငါပေးမည်။ လမ်းဘေးစက်ဘီးများကိုအချောသပ်သောဘောင်းဘီတိုများနှင့်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်ဘောင်းဘီတိုမပါဘဲသက်သောင့်သက်သာမရှိသောခံစားမှုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကုန်းနှီးသက်တောင့်သက်သာရှိခြင်းသည်အလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မြင်းစီးသူများသည်အရာဝတ္ထုများကိုမကြာခဏပြောင်းလဲလေ့ရှိသည်။
ပြိုင်ကားစက်ဘီးအများစုသည်ခြေနင်းဖြင့်မလာကြပါ၊ အကယ်၍ သင်သည်ရှည်လျားစွာစီးနင်းခြင်းသို့မဟုတ် EOBs အားကစားများပြုလုပ်ပါကသင့်အားအနည်းငယ်ပိုထိရောက်စေရန်ခြေနင်းကိုဖိ။ ဖိထားပါကအမျိုးသမီးများအတွက်သီးသန့်စက်ဘီးများကိုလည်းရယူနိုင်ပါသည်။ လိင်နှင့်အနည်းငယ်တိုတောင်း cranks အကြားခန္ဓာဗေဒကွဲပြားခြားနားမှုလိုက်လျောညီထွေဖို့တူညီတဲ့ဘောင်ပေမယ့်အဆက်အသွယ်ကွဲပြားခြားနားသောအချက်များ, ဒါပေမယ့်ဒီလုံးဝတင်းကြပ်စွာမလိုအပ်ပါဘူး။ သင်လမ်းကြမ်းပြင်၌အဆင်ပြေဆုံး၊ အဆင်ပြေသောဂီယာ၊ ဒီကက်ဆက်တွင်ကြီးမားသောကြယ်ပွင့်များနှင့်ဘရိတ်ပြန့်ပွားခြင်းများကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လမ်းပေါ်တွင်ပိုမိုမြန်ဆန်သောပြိုင်ကားများနှင့်အတူလမ်းဘေးဆိုင်ကယ်တစ်စီးရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ တောင်တက်စက်ဘီးတစ်စီးထက်မကကျောက်စရစ်ခဲများသို့မဟုတ်သတို့သမီးအရံများကိုစီးနင်းနိုင်သည်၊ သင်ပုံမှန်လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်တစ်စီးတွင်မလုပ်ချင်သောအရာသည်ရောနှောမြေပြင်အနေအထားရှိလူတို့အတွက်စွန့်စားခန်းရှာဖွေခြင်း၊ စက်ဘီးအနည်းငယ်ထုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ခရီးဝေးရုံသို့သွားခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဘယ်သူကလမ်းပေါ်မှာမနေချင်ဘူး။
တာယာအဟောင်းတွေကိုလဲပါးလွှာပြီးအဆင်ပြေချောမွေ့စေတဲ့လမ်းမတွေကိုလဲလှယ်နိူင်တယ်။ သင်ကလမ်းဘေးဆိုင်ကယ်တစ်စီးရတယ်။ ငါကဒီစက်ဘီးကိုပရိတ်သတ်ကြီးပါ၊ အစောပိုင်းကျောက်စရစ်ခဲစက်ဘီးကိုပေါင်ငါးရာ (၆) ပေါင်လောက်ရတယ်။ ယူရို ၁၀၀ ယူရိုဒီဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်၊ သတင်းအချက်အလက်ကိုတွေ့တယ်၊ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုထပ်တူထပ်ကာပေးပါ။ အခုကံကောင်းချင်တော့စက်ဘီးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ချင်တယ်။ ဒီဆောင်းပါးတွေနဲ့အခြားတကယ်အသုံးဝင်တဲ့အစပြုသူအချို့အကြောင်းဆောင်းပါးတွေရှိတယ်။ ငါအိမ်ပြန်သွားပြီ၊ ငါ့ကစားစရာတွေနဲ့ကစားတယ်
၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာလတွင် ASE (မိဘကုမ္ပဏီASI နှင့် Performance Bicycle မှဒေဝါလီခံကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ထွက်ခွာသွားသည်အမေရိကန်ဖြန့်ဖြူး၏ကံကြမ္မာဖူဂျီစက်ဘီးမသေချာမရေရာ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်တွင် HEAD သည် ASE ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ယူခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်ကုမ္ပဏီ၏ဖူဂျီ)အပြင်ထွက်ဒေဝါလီခံခြင်း၏။
ဒီနေ့အပတ်ရဲ့နောက်လာမယ့်လုယက်မှုတွေအတွက်လာမယ့်ဒီ alexwait စောင့်ဆိုင်းစောင့်မျှော်မှုကိုငါစောင့်မျှော်နေပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် ။exex နှင့် olliew ကြိုဆိုတဲ့ gcn နည်းပညာပြပွဲမှာကြိုဆိုပါတယ်။ စက်ဘီးလုံခြုံမှုနှင့်အချို့သောစက်ဘီးများသည်အဘယ်ကြောင့်အလွန်စျေးကြီးရသနည်းဟူသောအဓိကဆွေးနွေးမှုဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အဖုံးတွင်ပြန်လာကြလိမ့်မည်။ သင်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူနည်းပညာပြသခြင်းကတည်းကပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်အတွက်နည်းပညာပြပွဲမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ အချိန်အနည်းငယ်ကြာတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စလုပ်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်၊ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာစစ်တမ်းကောက်ယူမှုကိုစတင်နေပြီ၊ ကောင်းပြီ၊ ရလဒ်တွေရကြမယ်။ ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့ Spicoaero ပြတ်တောက်နေတဲ့အရက်ဆိုင်တွေအကြောင်းလူတွေဘယ်လိုထင်သလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ နှင့်အဘယ်သို့အဲလက်စ်၏လူငယ်ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်အကြောင်းမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ရိုးသားသောကြည့်ရှုသူများအကြောင်း၊ ဤရလဒ်ကိုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ခဲ့သည်၊ ဟုတ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ရိုးသားမှုအတွက်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ လူအများအပြားနှင့်သူတို့မတွေ့လိုပါ။ ဒါဟာကြီးကြီးမားမားမဟုတ်, ထောင့်အတွက်အန္တရာယ်ရှိလိမ့်မယ်ထင်ပေမယ့်အဓိကဆွေးနွေးမှုအချက်ပေါ်တွင်အချို့စက်ဘီးဤမျှစျေးကြီးသည်အဘယ်ကြောင့်ယခုငါဤအမှန်တကယ်ကျယ်ပြန့်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပေမယ့်ကျနော်တို့ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောဒေသများအများအပြားရှိပါတယ်, isn '' မှန်ပါတယ်၊ နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာစက်ဘီးတွေဟာအဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေအများကြီးဖြစ်လာပြီးသူတို့နဲ့အတူစျေးနှုန်းတွေကျလာတာကိုငါတို့တွေ့ခဲ့ရပြီလား။ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စတုတ္ထအကြိမ်မြောက်စက်ဘီးစီးခြင်းဖြင့်စက်ဘီးစီးရန်အတွက်အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများစွာပြုလုပ်နေသည်။ သူတို့ပေါ်လာရုံသာမက၎င်းတို့သည်ထိပ်ဆုံး၊ အမြန်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ နှင့်အပေါ့ဆုံး။ နှစ်အနည်းငယ်ကြာမြင့်နိုင်ပြီးထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်ဤကုန်ကျစရိတ်များကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာယူဆောင်နိုင်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ သတိပြုရမယ့်အချက်တစ်ခုကတော့ဒီနည်းပညာအားလုံးဟာစျေးသက်သက်သာသာသာရှိတဲ့နေရာတွေမှာနစ်မြုပ်သွားနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်ကခဏလောက်ကြာမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီလိုစျေးကြီးတဲ့စက်ဘီးစီးခြင်းကြောင့်မအံ့သြသင့်ဘူး၊ နောက်ဆုံးမှာတော့နည်းပညာဟာအောင်မြင်သွားမှာပါ။ လူတိုင်းအတွက်အကျိုးရှိမှာပါ။ နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာထိပ်တန်း end အုပ်စုဟောင်းတွေကိုစျေးသက်သက်သာသာနဲ့အုပ်စုလိုက်နှိုင်းယှဉ်ပြီးမတူညီတဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပါသေးတယ်။ နောက်လာမယ့်ခေါင်းစဉ်ကိုသွားပါပြီ၊ အခုဆိုရင်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်စားသုံးသူတော်တော်များများကဒီပစ္စည်းဟာကုန်ကျစရိတ်အများစုလို့ထင်ကြလိမ့်မယ်။ ဒီအဆင့်မြင့်နည်းပညာပစ္စည်းတွေဟာအတော်လေးစျေးကြီးပေမယ့်ကုန်ကျစရိတ်ရဲ့အများစုကိုဖုံးအုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ ? မဟုတ်ပါ၊ အလုပ်သမားသည်အမှန်တကယ်စဉ်းစားရမည့်အကြီးမားဆုံးကုန်ကျစရိတ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အဆင့်မြင့်ကာဗွန်စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးသောဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန်လူ့လုပ်အားများစွာလိုအပ်သောကြောင့်စက်များဖြင့်အလိုအလျောက်မပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီလူတွေအားလုံးကိုစက်ဘီးစီးတာကိုပိုပြီးရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ဖို့စျေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကအချိန်ကုန်လေလေ၊ စျေးဝယ်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်၊ နောက်စျေးကတော့အခမဲ့စျေးပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကအဲဒီစျေးကြီးတဲ့စက်ဘီးကိုမ ၀ ယ်ဘူးဆိုရင်စျေးကွက်ကစျေးရှိလို့ပဲ။ စျေးကွက်မရှိနိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ထုတ်လုပ်သူများသို့မဟုတ်ရောင်းဝယ်သူများကရောင်းရန်အတွက်ထိုကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချရန်လိုသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်စားသုံးသူများအနေဖြင့်ဤစက်ဘီးစီးခြင်းကိုအလွန် ၀ ယ်ကြသဖြင့်၎င်းတို့အားပြန်လည်ရောင်းချခြင်းကြောင့်၎င်းတို့အားရောင်းချသောဆိုင်အတွက်ဈေးနှုန်းဆက်လက်ကျဆင်းနေသည်။ t ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်အဲဒီမှာရှိနေပြီးသူတို့ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုအသုံးချတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်အမြတ်ရဖို့လိုတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆိုင်ကလုံးဝမရှိဘူး၊ မင်းဆိုင်ကယ်လည်းမ ၀ ယ်နိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်စက်ဘီးရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကတိုက်ရိုက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တချို့ကစက်ဘီးရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကိုဖြတ်တောက်နိုင်တယ်။ အဲဒီအလယ်အလတ်မှာမရှိဘူး ဟိုပိုက်ဆံနည်းနည်းကိုမှန်ကန်စေသည်။ အတိအကျပြောရရင်ဒါဟာမျှတတဲ့အချက်ပဲ၊ ငါတို့စက်ဘီးဆိုင်တွေကိုအနီးကပ်စောင့်ရှောက်ရတာကိုနှစ်သက်တယ်၊ ဂုဏ်သိက္ခာအမှတ်တံဆိပ်ကိုလည်းမစဉ်းစားဘူး၊ ထုတ်လုပ်သူတိုင်းအတွက်အခုတန်ဖိုးက၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ အသွင်အပြင်နဲ့ခံစားမှုပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်များသည့်ဆိုင်ကယ်၊ သင်စက်ဘီးတစ်စီး ၀ ယ်သောအခါသင်ထိုစက်ဘီး၏အမည်ကိုလည်းဝယ်သည်မဟုတ်လော။ ဒါကြောင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဟာတော်တော်စျေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေဟာသူတို့ရဲ့စျေးကွက်မှာအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုလူကြိုက်များပြီးနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းအောင်ထားကြပါတယ်။ တချို့နံပါတ်တွေကိုကြည့်ဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ ဒါဆိုဒီမှာငါ့လက်ပ်တော့ပ်လိုလိမ့်မယ်။ ငါ Alex Soso ရှိတယ်
ဒီမှာပေါင်တစ်သောင်းတန်ဘိုးကုန်ကျစရိတ်အတွက်အခြေခံကျတဲ့ဂဏန်းအချို့ကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒါဟာစက်ဘီးဆိုင်ကယ်တစ်စီးပါ။ ကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့ (၄) နှစ်တာကာလအတွင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရဲ့ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်တဲ့အခါကျွန်တော်ဘာပျက်သွားသလဲဆိုတာသိပါတယ် တစ်မိုင်လျှင် ၂၅ ပေါင်နီးပါးကျွန်ုပ်ထင်သည်ထက်များစွာပိုသည်။ ဆိုလိုတာကတော့ဂဏန်းတချို့ကိုကျွန်တော်တော်တော်ရက်ရောတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကဘေ့စ်ဘောနံပါတ်တွေပေးတယ်၊ ဒါကြောင့်မိုင် ၁၀၀ မောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လုပ်မှာလဲ။ ဒါကကျွန်တော့်ကိုကုန်ကျစေတယ်၊ ​​ပေါင် ၂၅ ကုန်ကျနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်အဲလက်စ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်အဲလက်စ်ဟုတ်တယ်၊ ပေါင် ၂၅ သိတယ်၊ ဘတ်စ်ကားစီးတာထက်ဈေးပေါတယ်၊ တက္ကစီကြည့်တာတောင်မှစျေးသက်သာတယ်။ ပျော်စရာ၊ ပျော်စရာ၊ မင်းရဲ့ဝါသနာပါ။ ဒီတော့တန်ဖိုးဟာစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟုတ်ဘူး၊ စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပဲ၊ မြေပြင်အနေအထားကင်းထောက်ကိရိယာတွေပျော်စရာကောင်းတယ်၊ ဒါက ၀ န်ဆောင်မှု Cores နဲ့အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သူတို့ကတော်တော်လေးအေးမြပြီးထူးခြားတဲ့အရောင်ရှိပြီးပစ္စည်းတွေကိုရောင်ပြန်ရောင်ခြယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကျောက်စရစ်ခဲဖိနပ်အသစ်ကိုထုတ်ပေးနေပါတယ်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ဦး ဆုံးငါကြိုက်တယ်၊ သူတို့ကမင်းတို့ဟာရွှံ့နွံအနည်းငယ်ထဲကို ၀ င်လာပြီးမင်းရဲ့ဖိနပ်ရဲ့အောက်ခြေမှာစိမ်းလန်းသောရွှံ့အလွှာကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြပြီ၊ အစိမ်းရောင်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအေးဆေးနေတဲ့ဖိနပ်ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်သူတို့ဟာ Hit နဲ့အတူဆက်လုပ်နေခဲ့ကြတာပါပဲ လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအရာများဖြစ်ပြီးသင်၏သန္ဓေသားများအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းရန်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သော Pack သည်သင်၏မုန့်များရှိသည်။ အကယ်၍ သင်ကားမောင်းနေစဉ်သင်၏ရေခဲမုန့်ကို ၀ င်စားလိုလျှင်၊ သင်၏တင်ပါးဆုံရိုးတွင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးသူတို့သည်ကျောပိုးအိတ်များထက် ပို၍ သက်တောင့်သက်သာရှိကြောင်းပြောဆိုကြသည်။ alex သည်အဘယ်ကြောင့်ကောင်းသည်ကိုငါနားလည်သကဲ့သို့သင်နားလည်သည့်အတိုင်းကျောပိုးအိတ်ရှိလျှင် စက်ဘီးတစ်စီးကိုသုံးတာကအရမ်းလေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းပြန်မောင်းနှင်ပြီးအမြဲတမ်းပြန်လှည့်ရတာစီးရတာတော်တော်စိတ်မသက်မသာဖြစ်တာပေါ့။ ဒါကြောင့်သင်ဟာမညီမညာဖြစ်နေတဲ့မြေအနေအထားကိုစီးတဲ့အခါ hip pack ကပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ နောက်ကျောလူ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာသူတို့ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့နည်းပညာအ ၀ တ်အထည်တွေရခဲ့တယ်။ ဒါကိုတွေ့ရတော့ကျွန်တော်အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာအလုပ်ကိုကားမောင်းပြီးသင်ကော်ဖီကို meno နဲ့အတူယူလာဖို့လိုအပ်တာကိုသိစေခဲ့တယ် ငါတို့မှာစက်ဘီးခွက်ကိုင်ဆောင်ထားတယ်လို့ထင်ခဲ့ဖူးတယ်၊ အဲဒါကမင်းရဲ့ကော်ဖီကိုမင်းတို့နဲ့အတူယူဆောင်လာနိုင်တဲ့လက်ကိုင်ဘားတွေလိုပဲသွားနိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ Sieဆိုင်ကတော့တံဆိပ်ခတ်ထားတဲ့အဖုံးလိုလိမ့်မယ်၊ သင်၏ခွက်ဖလားကိုလဲကျခြင်းမှကာကွယ်ရန်အတွင်းပိုင်း၊ သို့သော်ဘာလဲ။ သငျသညျ pothole တစ်ခုသို့မဟုတ်အမြန်ဝင်တိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရုတ်တရက်ချိုးခြင်းခံရလျှင်သင်အနည်းငယ်ဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ ငါ gcn နည်းပညာစိန်ခေါ်မှုရှိရာတစ်နေရာရာမှာကြိုးစားရန်လိုအပ်သည်။ ကော်ဖီမည်မျှသိမ်းထားမည်နည်း။ သင်၏ cupon အလုပ်လုပ်ရန်နှင့်အမြန်ဆုံးဖြစ်ဖို့နည်းလမ်း။
ဒီတစ်ခါလည်းကော်ဖီ -Ollie အလွန်အကျွံများအတွက်ပြစ်ဒဏ်များသူကစစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ဘူးပေမယ့်သူကဝေးမောင်းရန်မလိုပါအဘယ်သူမျှမအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်ရှိပါတယ်။ သူကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံး italia c59saddle ကတော့ ၆၁ ဂရမ်ရှိပြီးအံ့အားသင့်စရာအကောင်းဆုံးကုန်းနှီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကတကယ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် ၆၁ ဂရမ်ဆိုတာဘာလဲ။ အဲလက်စ်၊ လာစမ်းပါ၊ ငါဒါကိုနည်းနည်းလေးလေ့လာခဲ့တယ်။ အလေးချိန်က ၆၁ ဂရမ်အလေးချိန်ရှိတဲ့သင်တုန်းပဲ။ ပိုအရေးကြီးတာကအပြည့်အရွယ်အစားရှိတဲ့ဥက ၆၀ ဂရမ်အလေးချိန်ရှိတာမို့သင် eggway မှာမထိုင်ချင်ဘူး။ နည်းနည်းပျက်စီးလွယ်ပါသည်ကကုန်းနှီးမဟုတ်ဘဲကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှအလွယ်တကူအသံမထွက်ရသနည်း၊ ၎င်းသည်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာကာဗွန်ဖိုင်ဘာရထားလမ်းကာဗွန်ဖိုက်ဘာအခြေခံနှင့်ကာဗွန်ဖိုက်ဘာအသစ်များမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူပဲ matewell padding ပါသောကုန်းနှီးလိုအပ်သည်ဟုပြောရန်အလွန်လွယ်ကူခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးအမှန်တကယ်မှာကြားထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်အားစိတ် ၀ င်စားမိသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအပေါ့ဆုံးကုန်းနှီးပုံကိုကြည့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့သင်တက်သွားတဲ့အခါသင် Ollie ကျလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ဒါကနောက်ပူတဲ့နည်းပညာနောက်တစ်ခုမှန်မှန်မလုပ်တာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ inflatable ကုန်းနှီးအဖုံးပါ။ အရမ်းကြည့်ကောင်းပါတယ်။ ကြည့်ရတာတကယ်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကနည်းနည်းလေးထူးဆန်းနေသလိုပဲ၊ အဲလက်စ်ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှာကိုးကားချက်နည်းနည်းယူပြီး 3D airbag ဒီဇိုင်းကိုသုံးတာလို့ပြောတာကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ တစ်ခုလား တင်ပါးဆုံဖိအားကိုထိရောက်စွာဖြန့်ဖြူးရန်အတွက်ဓာတ်ငွေ့အိတ်အတွင်းလေထုလည်ပတ်မှုနှင့်ထိရောက်သောထိတ်လန့်သောကြားခံတင်ပါးနှင့် aftershock အလွန်ကောင်းမွန်သော permeability ၎င်းသည်သင်အနည်းငယ်စဉ်းစားသောကားမောင်းသူ mewas ၏အကောင်းဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သော်လည်း Kickstarteruh တွင်မည်မျှမြှင့်တင်သနည်း။ မင်းရဲ့မိုင်ပေါင်း ၅၀၀ အကွာကပေါင် ၄၀၀၀၀ ပေါင် ၄၀၀၀၀ ပေါင်ဆိုတော့ငါသူတို့မကြာခင် Shopknee ကိုရနိုင်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ အစိမ်းရောင်ရှေ့ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် ၂၀၂၁ မှာဒီဥကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Bianchi အစိမ်းရောင်ဥတွေကသူတို့ရဲ့စက်ဘီးအသစ်စက်စက် Bianchi ကိုသုံးလိမ့်မယ်။ သူတို့ကရရှိနိုင်သောစက်ဘီးအသစ်များကိုသုံးလိမ့်မည်။ သင်ကအထူးစက်ဘီးနှင့် Aquila ကိုစတင်မည်ဖြစ်သောစက်ဘီးသုံးစီးကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင့်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောစက်ဘီးသုံးခုရှိသည်။ ဟုတ်ကဲ့သင်အထူးအလင်းသည် gC ဖြစ်သည်။ ပတ် ၀ န်းကျင် ၇၅၀ ဂရမ်ရှိသောလှပသောပေါ့ပါးသည့်စက်ဘီးပါသည့်စက်ဘီးသည်သင်၏လေခွင်းအားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ခွဲထွက်ခြင်းအဆင့်များနှင့်သင်၏ Aquila yes သို့မဟုတ် Tequila တို့အတွက်သင့်လျော်သည်။ ယခုငါသန့်ရှင်းစွာထားသည်။ ယခုဤခရီးသည်သင်၏လမ်းဖြစ်သည်။ အချိန်ကာလအားဖြင့်ကားမောင်းတာလည်းမင်းအချိန်ကောင်းပဲလေ။ ဒီမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေအတွက်အချိန်နည်းနည်းစမ်းကြည့်ကြည့်ရတယ်။ အရောင်တွေကိုမမေ့နိုင်ဘူး။ အရောင်တွေကိုကြည့်လို့ရတယ်။ သင်ကတံဆိပ်ကိုအသုံးပြုချင်သည်မဟုတ် နည်းနည်းပေါ့ပါးတယ်၊ ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့၊ သင်က Bianchicolor နဲ့အမြဲတမ်းနေတယ်။ ဒီတော့အဲဒီမှာထွက်ရှိအားလုံး bianchifans အဘို့အဘယ်အရာကိုအဘယ်သူမျှမ carefree ကြက်ဥအအေးဆုံးရောင်စုံဆိုင်ကယ်ဆိုင်ကယ်စီးသွားကြသည်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့, ငါတို့ဤအချိန်ဤအချိန်၌ခရစ်စမတ်မုန်ရှိပါတယ်တော်တော်လေးမင်းသမီးကျွန်တော်တို့ကိုဤ uh ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်များကိုစေလွှတ်ကြပေမယ့်သူတို့ကဒါကောင်းစွာ Ollie မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ကြသည် ဟုတ်ကဲ့၊ မင်းကိုမင်းတို့ဖယ်ရှားပစ်ရမယ်ငါ့နာမည်ကိုလုပ်ပြီးပြီငါ့နာမကိုမသွားဘူးလာဟေ့ကောင်းပြီငါတို့ဆီကိုလာခဲ့ပါဘုးံနောက်ထပ်ဘာကောင်းလဲ၊ ငါတို့ကရက်သတ္တပတ်ရဲ့ရေခဲမုန့်တွေမှာနေတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ကက်သရင်းစိတ်အားထက်သန်သော gcn ကြည့်ရှုသူနှင့်စိတ်အားထက်သန်သောစက်ဘီးစီးသူနှင့်မုန့်ဆိုင်တို့ကဤကဲ့သို့သောအမြင်သည်မည်မျှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားမှန်ကန်သောခရစ်စမတ်ကိတ်မုန့်ကိုကြည့်ရှုခြင်းအားမှန်ကန်စွာသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုကြည့်ပါ။ ဘူးခွံသေးသေးလေးမှာသိပ်မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်ငါ့မှာစာမျက်နှာရှိသေးတယ်ဟုတ်တာပေါ့ဒါငါ့ဥစ္စာပါငါဒီမှာပါ။ ဒီ amaretti ဘီစကစ်တွေထဲမှာမင်းသွားတာကတိုတိုပေါင်မုန့်တွေပဲ။ ကောင်းပြီလို သူတို့ကဒီစာမျက်နှာကိုသံမဏိနဲ့လုပ်ထားတာ။ truffle ဟုတ်တယ်ဝမ်းနည်းပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းကဒီကိတ်မုန့်ကိုဖွင့်မယ်။ သင် beeryeah သွားချင်တယ်လို့ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့သူဟာကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုမသိဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်လား သင်ကလိုချင်သောဖြတ်တောက်မှုများဟုတ်ကဲ့ကောင်းသည်ငါပဲပွင့်လင်းဖြတ်တောက်ခြင်းငါအနားမှဖဲကြိုးကိုချွတ်ယူသင့်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းပါတယ်ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကိတ်မုန့်ဖြတ်တောက်ခြင်းသင်လိုချင်တဲ့အပိုင်းအစကဲ့သို့ကြီးမားသည်ကိုယ့်ဒီမျိုချခြင်းနှင့်ငါ့အလေးချိန်စောင့်ကြည့် yeahyeah ငါနင့်ကိုငါကြိုပြောနေတာဘာလဲသူငယ်ချင်းသိပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါတစ်ပတ်လုံးစောင့်နေခဲ့တာပေါ့သူတို့မကောင်းဆိုးဝါးပို့လိုက်တာငါတို့သိပြီနောက်သိပ်နောက်ကျတာကစိတ်မပူပါနဲ့နင်အရမ်းပျော်စရာကောင်းတယ် မင်းရဲ့သီချင်းတွေထဲကငါ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ။ ဒီတော့ဒီရက်သတ္တပတ်ရဲ့နောက်ထပ်ဘောင်းဘီအသစ်ကဒီအများကြီးနဲ့အတူပြီးဆုံးသွားပြီ။ အခုတော့ upgradebye upgradeand ကိုအရှိန်မြှင့်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။ သင်ဒီမှာစက်ဘီးပစ္စည်းကိရိယာတွေဒါမှမဟုတ်သင်ရဲ့အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီ။ စက်ဘီးဘဝသည်အလဟ is ဖြစ်နေပြီးအိုလီ၏ကိုးကားချက်သည်အမြင့်ဆုံးဆုကိုရရန်အဆင်မပြေပါ ဒီရက်သတ္တပတ်၏နောက်ဆုံးဆုမှာ gcn shadow တဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကပြုလုပ်ခဲ့သောစစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရလူသတ်သမားဆိုင်ကယ်၏ဓာတ်ပုံအချို့ကိုရရှိနိုင်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် pellegrin mtvs lotuslookalike နှင့် burnes peugeotrenovationyeah နှင့် burnes တို့၏ရလဒ်များကိုကြည့်ကြပါစို့။ ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းက Pellegrin ရဲ့ဆိုင်ကယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်တာမို့ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းအနိုင်ရတာဟာပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံတာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီပို့စာကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်။ ဒါကြောင့် facebook ကိုကြည့်လိုက်ပါ။ မှန်ပါတယ်၊ ဒီအပတ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ် davzadz ahwinter သူတို့ကဒီနောက်ဆုံးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလစက်ဘီးရတယ်စပ်ဘောင်ပတ်ပတ်လည် built တစ်စီးဆိုင်ကယ်အဆိုတင်သွင်းသည် hedabzad ရော်ဘာဆန့်ကျင်သည်ယခု thegump ကိုယ့်ငါ louisville ဖို့ဘယ်တော့မှမခဲ့ကြပါပြီ kentucky အတွက် Louis Lewisville ကနေလာပါငါမရှိသည်ငါမရှိသည်မဟုတ်ကိုယ့် တစ်နေ့မှာစက်ဘီးစီးရတာနဲ့ကျွန်တော်ပျော်ရွင်ရတဲ့တစ်ဝက်လောက်ကငါ့စက်ဘီးကိုလှည့်ပတ်နေတာပဲ။ ဒါကြောင့်ဆိုင်ကယ်ဆိုင်ကိုဘီယာရေခဲသေတ္တာ - တီဗီ - နွားမ - ကော်ဇော - နှင့်ကားရပ်နားရာနေရာ - အစုအဝေးနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းမပြုရန်အမျိုးသမီးသည်ခဲယဉ်းသည်။ getti ငါ့ကိုမြေအောက်ခန်းထဲက ng ng ပြီးတော့အလင်းရောင်ရဲ့အရောင်ကိုဘာကြောင့်ကြည့်ရတာလဲကြည့်လို့ရတယ်။ တယ်လီဟိုးမှာ Ollie တောင်ရှိတယ်ဆိုပါစို့၊ ငါတို့ပြောင်းလဲရမယ်၊ ဒါပေမယ့်တကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်၊ အထင်ကြီးစရာကောင်းတယ်၊ gcn အက်ပလီကေးရှင်းတွင်သင်နှင့်မတူပါ။ ထို့ကြောင့်အနိုင်ရရှိပြီးမဲဆန္ဒရှင်များကိုအနိုင်ရရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အန္တိမဆုရထားသောအရိပ်ရရှိသူများဖြစ်သည်ကိုယခုမေ့လိုက်ပါ။ safe alex Nu n, သူတို့ကိုစက်ဘီးရှိ gcn app သို့သင် upload တင်သည်။ သင်သည်ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ကောင်းသည်ဖြစ်စေမဲပေးနိုင်သည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်လှေသမားတော်ထဲ၌ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖူးသည်ကိုဖတ်ရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုအမြန်ဆုံးစက်ဘီးလုံခြုံစက်ဘီးစီးနိုင်းလ်ပထမ ဦး ဆုံး neilbauer တစ်ခုမှာသူရှိနေတာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် sprint1983 ရှိတာကိုစောင့်ကြည့်ပါ ဦး ။ စောင့်ဆိုင်းခြင်းကနေစောင့်ဆိုင်းခြင်းစောင့်ဆိုင်းခြင်းကနေဒါဟာတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အချက်ပါ။ ကျွန်တော်တော်တော်လေးပထမ ဦး ဆုံးတရားစီရင်ခံရဖို့ရှိပါတယ်။ တိုက်ပွဲ၊ ဆိုင်ကယ်ရဲ့လုံခြုံမှုကိုသိလားဟုတ်ပြီ၊ ငါယူမယ် အဆို့ရှင်တွေတန်းစီထားတယ်၊ ပြောင်မြောက်စွာတင်ထားတယ်၊ အဆို့ရှင်က ၄၅ ဒီဂရီမှာ crankset ရှိတယ်၊ အလွန်သန့်ရှင်းတယ်၊ အဖြူရောင်၊ ဟုတ်တယ်၊ ငါအဖြူရောင်ကိုကြိုက်ပေမဲ့အဖြူရောင်စက်ဘီးကိုကြိုက်တယ်နောက်ခံကုန်းနှီးကောင်းတယ်။ ဟုတ်တယ်ငါအရမ်းကောင်းတယ်။ ဒါကောင်းပါတယ်ငါချက်ချင်းငါးရဲ့စွမ်းအားကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲတယ်နောက်နောက်တက်မယ်ငါတို့ကအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ turbo o creocomp carbon 'ကို anderslee ဂျော်ဒန်ရဲ့ပထမဆုံးအီးကပေးပို့လိုက်တာပါ။ ငါတို့အတော်လေးအချိန်အကြာကြီးရှိခဲ့ကြသောကြောင့်ငါဒီတစ်ခုကိုရွေးလိုက်သည်။ သို့သော်ဤအရာသည်နိမ့်သောနိမ့်ကျသောတင်ပြမှုမဟုတ်ပါ။ မင်းကသဘောတူသည်ဟုပြောမည်ငါကားဂိုဒေါင်တံခါးနောက်ခံရှိသည်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လား၊ ဘုရားသခင့်ရုပ်ပုံများကိုတိုက်ရိုက်မပြသပါ။ အဆို့ရှင်များသည်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံသာကောင်းသည်။ ကောင်းသည်။ လာမယ့်မတ်လ charism23202 ဟုတ်ကဲ့ um patch တစ်ယောက်ပြောချင်တာကဒီဟာက ventum ns1 ဖြစ်ပြီးငါပြောရမယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူတကယ်မယုံကြည်ခဲ့ဖူးတဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့စက်ဘီးလေးပါ၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကတကယ်ကိုအေးပါတယ် သေချာတာပေါ့။ စူပါစက်ဘီးနဲ့တူတယ်၊ ဒါပေမယ့်ထုတ်လွှတ်မှုအနည်းငယ်ကမစ်ရှင်တွေရှိတယ်။ မမှန်ကန်သောဂီယာများမရှိပါဘူး။ Windo Ws နှင့်ဘီးများမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာသေးငယ်တဲ့အိတ်ဆောင်အိတ်များမရှိပါဘူး ငါတို့နောက်မှလုပ်ရမယ်တဲ့ဓာတ်ပုံအတွက်နောက်ကျောမှာအလင်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ယူဖို့လိုတယ်ကောင်းလိုက်တာမပျော်ဘူး။ လာမယ့် upi မှာခေါင်းလောင်းသံမြည်တာလို့ငါမထင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကြည်လင်သောတိုက်တေနီယမ်လမ်းကဒီစည်းနှောင်မှု အေးမြသည်။ ယခုအေးမြသောစက်ဘီးဖြစ်သည်။ ယခုလူများကနောက်ခံကရှုပ်ထွေးနေပြီဟုပြောလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်ထပ်ပေါင်းထည့်သည်ဟုထင်သည်၊ အနည်းငယ်မျှသာအရသာပေးသည်မဟုတ်ပါ၊ agraffiti က၎င်းသည်ကာဗွန်ချိတ်ဖြင့်တိုက်တေနီယမ်ကိုက်နေပုံကိုကြည့်သည်။ အမေနဲ့အမေကအမေနဲ့အမေကိုခွဲခွာပြီးအတူနေခဲ့ကြတာပါ။ စူပါညာဘက်အခွင့်အရေးယူပါ၊ အိုကေ။ ဒါနောက်ဆုံးပါ၊ ဒီဟာငါတို့နောက်ဆုံးဖြစ်တယ် စက်ဘီးစီးတာဟာအမြဲတမ်းပြသခြင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲ။ ဒါကြောင့်စက်ဘီးတွေထဲကို ng ကိုဆက်ပြီးပို့လိုက်ပါ။ သင်လုပ်ရမှာက monto ကိုတခြားလူတိုင်း gcn မှာ upload လုပ်လိုက်တာပဲ။ မဲပေးနိုင်တယ်၊ ငါတို့ဟာ showyeah ညာဘက်မှာရှိတဲ့အကြိုက်ဆုံးတွေကိုရွေးပါလိမ့်မယ်။ gcn techshow ကမယုံနိုင်စရာပါပဲ။ မိနစ်တိုင်းကိုငါချစ်တယ်၊ ရေခဲမုန့်ဟာငါအကြွင်းမဲ့အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ gcn ဆိုင်တွင်ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်များပိုမိုလိုအပ်ပါက gcn ဆိုင်သို့သွားရန်မမေ့ပါနှင့်၊ သင်၏စက်ဘီးစီးသူများအတွက်ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်အချို့နှင့်ယခုအပတ်အတွက်လုံလောက်သောအေးမြသောစုဆောင်းမှုကိုသင်ရနိုင်သည်။ သင်ဤအရပ်၌ဆောင်းပါးကြိုက်တယ်မျှော်လင့်ပါတယ်သင်ကဒီဆောင်းပါးပျော်မွေ့မျှော်လင့်ပါတယ်နှင့်ငါ Hank လာစီးနှင့်ငါနည်းပညာကိုပြသခဲ့ဘူးငါအဆိုးဆုံးအိပ်မက်မက်ငါသွားစီးငါလက်ျာဘက်ကြင်ကြင်နာနာသင်ဤဆောင်းပါးကိုခံစားနှင့်သင်ကကြီးမားတဲ့လက်မပေးလျှင်, ငါငါ၏အရေစာနှင့် yeahbizar အရာအားလုံးကိုစား ကိုယ့်ကိုယ့်အတွက်တယ်သင်လိုချင်သောအရာကိုလုပ်နေတာစတင်
Cannondale SuperSix Evo Hi-Mod Disc ။
Giant TCR အဆင့်မြင့် Pro0disk ကို။
အထူးပြု S-Works Tarmac SL7 Dura-Ace Di2 ။
Pinarello Dogma ကို F12 ။
BMC Teammachine SLR01 နှစ် ဦး ။
Cannondale SystemSix မင်္ဂလာပါ - Mod ။
Trek Madone SLR9Disc eTap ။
Canyon သည် Aeroad CFR Di2 ။
ကုမ္ပဏီကြီး Contend SL1 ။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ။
Cannondale CAAD13 disc ကို 105. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်။
ဗန် Rysel Ultra CF. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ။
Trek Emonda ALR Disc ၅။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ။
Cannondale SystemSix ကာဗွန် Ultegra Di2 ။
အထူး Tarmac SL7 Dura Ace ကို Di2 ။
နှစ်များတစ်လျှောက်ကုမ္ပဏီသည်ရှေ့တန်း၊ အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖန်တီးခဲ့သည်စက်ဘီးကြောင်းမည်သည့်စိန်ခေါ်မှုကျော်စီးနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုသက်တောင့်သက်သာရှိမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကြာရှည်ခံမှု (သို့) အသွင်အပြင်ဖြင့်ဖြစ်စေသူတို့၏ယှဉ်ပြိုင်မှုထိပ်ဆုံးမှဖြစ်စေသည်။ သို့သော်သူတို့သည်ဈေးပေါပေါဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါစျေးကြီး။
စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်ဂျပန်Nichibei အဖြစ်ဖူဂျီကုမ္ပဏီသည်အမေရိကန်နှင့်အင်္ဂလိပ်ကိုစတင်တင်သွင်းသည်စက်ဘီး။ “ Nichibei” ဟူသောစကားလုံးသည် 'အဖြစ်ပြန်ဆိုသည်။ဂျပန်- အမေရိကန်။
သူတို့ကကောင်းတယ်သင်တစ် ဦး အဆင်ပြေရှာနေလျှင်ရွေးချယ်မှုဆိုင်ကယ်အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်း၊ အပန်းဖြေခြင်းနှင့်မြို့ပတ် ၀ န်းကျင်သို့မဟုတ်လမ်းများပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ လွယ်ကူသောလမ်းကြောင်းများနှင့်ရံဖန်ရံခါလမ်းတိုတိုများ။ သူတို့ကစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မဟုတ်ပါဘူးစက်ဘီး။
Fuji သည်ဆိုင်ကယ်အမှတ်တံဆိပ် Reddit ဖြစ်ပါသလား။
ငါနင့်ကိုချစ်တယ်ဖူဂျီခရီးသွား။ Excellent ကအစိတ်အပိုင်းများ, ကိုက်ညီကောင်းတယ်အလားတူ Tour ၏ထက်ဝက်စျေးနှုန်းစက်ဘီး။ ငါအမြင့်လမ်းအဆုံးရှိသည်စက်ဘီးဒါပေမယ့်ဖူဂျီအားလုံးနီးပါးချစ်ခြင်းမေတ္တာရရှိသွားတဲ့။ လူများသည်ပြင်ပအကြောင်းအချက်များမှအချက်အလက်များကိုယူပြီး 'အရည်အသွေး' ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ယင်းကို proxy အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင်ဖူဂျီအမေရိကဖြစ်လာခဲ့သည်အဖြစ်လူသိများယူအက်စ်တွင်ပထမဆုံးဂျပန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည့်ပိုမိုပေါ့ပါးသော Chromoly frames များကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ အခုအချိန်တွင်,ဖူဂျီရဲ့အရည်အသွေးအဖြစ်ဂုဏ်သတင်းစက်ဘီးပျံဝဲစတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင်လည်းဖူဂျီအားကစား ၁၀၊ ၁၀ မြန်နှုန်းကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်ဆိုင်ကယ်နောက်ထပ်အမှတ်တံဆိပ်တည်ထောင်။